I-Berber Family Lodge - I-Airbnb
I-Berber Family Lodge
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Mohamed Idahli
U-Mohamed Idahli Ungumbungazi ovelele
Sikujabulele ngempela ukwabelana ngekhaya lethu elihle nezivakashi zethu e-imlil valley kusukela ngo-2016. Lokhu kubonakala esimweni sethu esilula, esilula "sekhaya elikude nekhaya". Siyaziqhenya ngokudala indawo lapho abantu bengakhululeka khona manjalo futhi bazizwe besekhaya, njengokungathi bavakashele abangani noma umndeni. Silwela ukusiza izivakashi zethu ngaleyo mininingwane emincane evame ukudida izinhlelo zokuhamba (thekking,Amakilasi okupheka nabesifazane baseBerber emakhaya abo, uhambo lokuhlola izindawo zasemakhaya).
I-Berber Family Lodge ikunikeza umoya wokungenisa izihambi wama-berber ongcono kakhulu, ukhululekile, umoya onobungane kakhulu, amagumbi ahlotshiswe ngemihlobiso ehamba phambili yesimanje yama-berber. Uzobe ulele emibhedeni enosayizi ababili noma oyindlovukazi, ugqoke ilineni elikhethiwe le-percale lekhwalithi elikhethiwe kanye nokuthinta komuntu siqu kwezimpawu ze-morocco okwenza igumbi ngalinye likhetheke kakhulu futhi lihluke. Wonke amagumbi ethu anezindawo zokwenza ikhofi/itiye ukuze ukhululeke. Itholakala kahle kakhulu enhliziyweni ye-Villge, ukubuka indawo kuqala emnyango wakho.
I-Imlil iyidolobhana elincane elisezintabeni ze-Atlas eziphakeme zaseMorocco. Ingamamitha angu-1,800 (5,900 ft) ngaphezu kwezinga lolwandle. Isithombe sika-Imlil kanye nezinkinga namathemba abantu basezintabeni zaseMorocco kwavela ngo-1984 encwadini ka-James A. Miller ebizwa ngokuthi i-Imlil futhi yanyatheliswa yi-Westview Press. Iseduze nentaba i-Jebel Toubkal, isiqongo esiphakeme kunazo zonke eNyakatho ne-Afrika, yenza isisekelo esihle sokuzama ukukhuphuka i-Toubkal njengoba ilele ekugcineni komgwaqo wetiyela, futhi iyindawo yemvelo yokuqasha abaqondisi bezintaba kanye neminyuzi ukuya phambili. uhambo. I-Imlil iyisikhungo sokuvakasha kwezintaba eMorocco ngenxa yesikhundla sayo esiyingqayizivele. Ukusuka lapha, u-90% wezivakashi ukhuphukela e-Toubkal, intaba ephakeme kunazo zonke e-Morocco.
Ibungazwe ngu-Mohamed Idahli
Indawo engcono kakhulu yokuhlala e-Imlil high atlas Mountain! I-Berber Family Lodge ngokungangabazeki ithi iyindlu yezivakashi ehamba phambili e-imlil. Izinga lethu lezinsiza zokuhlala lihambisana nezinga lomhlaba. Izivakashi zethu zingajabulela ukubuka amasayithi aluhlaza e-Toubkal Intaba ephakeme kunazo zonke eNyakatho Afrika kusukela emakamelweni azo anefenisha kanokusho kanye nasemathafeni.
Indawo engcono kakhulu yokuhlala e-Imlil high atlas Mountain! I-Berber Family Lodge ngokungangabazeki ithi iyindlu yezivakashi ehamba phambili e-imlil. Izinga lethu lezinsiza zokuh…
UMohamed Idahli Ungumbungazi ovelele